पिसीआर मेशीन आएपनि कोरोना रिपोर्टमा ढिलासुस्ती, स्वाब दिनेहरू भन्छन् – मानसिक तनाव बढ्न थाल्यो | Hamro Biratnagar
गृह पेज स्वास्थ्य कोरोनभाइरस पिसीआर मेशीन आएपनि कोरोना रिपोर्टमा ढिलासुस्ती, स्वाब दिनेहरू भन्छन् – मानसिक तनाव...
पिसीआर मेशीन आएपनि कोरोना रिपोर्टमा ढिलासुस्ती, स्वाब दिनेहरू भन्छन् – मानसिक तनाव बढ्न थाल्यो
विराटनगर। असोज ८
विराटनगर महानगरपालिकाको पहलमा गत भदौमा कोशी अस्पतालमा ल्याइएको पिसीआर मशीनले दैनिक ९०० सम्म कोरोना जाँच्न सक्ने बताइएको थियो। तर प्रदेशमा दैनिक एक हजारको अनुपातमा परीक्षण भएपनि स्वाब दिएर हप्ता दिनसम्म पर्खनु परेकोमा गुनासो गरेका छन्।
प्रदेशमा अरू पनि विभिन्न प्रयोगशाला छन्। नयाँ मेशीन आएसँगै कोशी अस्पतालले नै हजारभन्दा बढी जाँच गर्न सक्ने बताइएको थियो तर स्वाबको रिपोर्ट किन आउँन ढिलो भएको हो? प्रश्न अनुत्तरित छ।
स्वाब दिएको छ दिन भएको र आजसम्म आफ्नो रिपोर्ट न आएको गुनासो गर्दै माेहित अग्रवालले फेसबुकमा लेखेका छन् – ‘छ दिनमा पनि रिपोर्ट नदिने मशीनको के काम? कोरोनाभन्दा मानसिक तनाव बढिरहेको छ। ‘
कोरोना जाँचका लागि स्वाब दिएपछि एक किसिमको छटपटी नै हुन्छ। पोजिटिभ पो आउने हो कि? पोजिटिभ रहेछ भने मेरा संपर्कमा आएका आफन्तहरूलाई के भन्ने यो खालको मनोवाद चलिरहन्छ।
रिपोर्ट ढिलो आउनुमा अस्पतालको आफ्नो समस्या पनि होला। निरन्तर फोन गर्दा कोशी अस्पतालको फोन उठ्न सकेन। केहीअघि ल्याबका कर्मचारीलाई नै कोरोना पुष्टि भएको समाचार पनि आएको थियो। यसबाट काममा पक्कै प्रभाव परेको छ।
तस्वीर- माेहित अग्रवालकाे पेसबुक वाल
विराटनगरका मेयरको अगुवाइमा आएको मेशीनदेखि विराटनगरवासी उत्साही थिए तर अहिले ‘जुन जोगी आएपनि कानै चिरेको’ खालको रिपोर्ट आइरहेको छ।
मेशीन थप भएर पनि रिपोर्ट समयमा न आउनुमा जनशक्ति अभाव होला भन्न पनि सकिएला तर अभावका कुरा सुनिएको छैन। सम्बन्धित निकायले यसबारे गम्भीर हुनु आवश्यक देखिन्छ।
अघिल्लो समाचारमोरङ-सुनसरी र भारतका सीमावर्ती जिल्लाका सुरक्षा अधिकारीहरुको छलफल
अर्को समाचारपर्यटन मन्त्रालयको दुई दिन विदा दिने प्रस्ताव मन्त्री परिषदमा पेश हुने